အစာစားပြီးပြီးချင်း ရေသောက်သင့်လား – Gentleman Magazine
08/07/2017 07/07/2017 escapetravelmagazine
အစာစားပြီးပြီးချင်း ရေသောက်သင့်လား ????
အစားတစ်ခုခု စားနေတုန်းမှာ ရေမသောက်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် စားပြီးပြီးချင်းမှာ ရေမသောက်ဖို့ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီလိုရေသောက်မယ်ဆိုရင် အစာချေရည်ရဲ့အာနိသင်ကို လျော့ကျသွားစေပြီး အစာမကြေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီအချက်က မှန်ကန်ရဲ့လားဆိုတာကို လေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။
အစောချေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်က အစားတစ်ခုခုကို သင့်ပါးစပ်ထဲကို ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်က စတင်ပါတယ်။ ပါးစပ်ထဲမှာ ၀ါးစားလိုက်တာနဲ့ အစားအစာတွေကို ပျော့သွားစေဖို့အတွက် တံတွေးထွက်လာအောင် ပါးစပ်ထဲက တံတွေးဂလင်းတွေကို လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေပါတယ်။ တံတွေးနဲ့ထိတွေ့ပြီးပျော့ပျောင်းသွားတဲ့အစာတွေကို သွားနဲ့ ၀ါးစားပြီး အစာရေမျိုပြွန်ကနေတဆင့် အစာအိမ်ထဲကို ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ အစာအိမ်ထဲမှာတော့ အစာချေအက်ဆစ်ရည်နဲ့ ထပ်တွေ့ပြီး ထပ်မံပြိုကွဲသွားပါတယ်။
ထို့နောက်မှာတော့ အူသိမ်တွေထဲကို ရောက်ရှိကာ ပန်ခရိယနဲ့အသည်းက ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ ပန်ခရိယအင်မ်ဇိုင်းတွေ၊ သည်းခြေရေတွေနဲ့ ရောနှောသွားပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်မှာ ပြိုကွဲနေတဲ့အစားအစာတွေက အဟာရဓာတ်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်က စုပ်ယူပါတယ်။ မစုပ်ယူနိုင်တဲ့ အစာဟောင်းတွေကတော့ အူမကြီးအတွင်းကို ရောက်ရှိသွားကာ အပြင်ကို စွန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီ အစာချေဖြစ်စဉ်ဟာ စားသောက်တဲ့ အစားအစာပေါ်မှာမူတည်ပြီး ၂၄ နာရီကနေ ၇၂ နာရီအထိ ကြာမြင့်ပါတယ်။
ရေသောက်ရင် အစာချေဖြစ်စဉ်ကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ ဘာကြောင့် ထင်ကြတာလဲ။
အစားစားနေတုန်းမှာ ရေသောက်တာဟာ အစာချေရည်တွေရဲ့ အာနိသင်ကို အားပျော့သွားစေတယ်လို့ အများစုက ယုံကြည်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တချို့တွေက ရေသောက်တာဟာ ခန္ဓာကိုယ်က အဟာရဓာတ်တွေကို မစုပ်ရသေးခင်မှာ အူလမ်းကြောင်းအတွင်း မြန်မြန်ဖြတ်သန်းသွားစေတယ်လို့လည်း ယူဆတတ်ကြပါတယ်။ ဒီယူဆချက်တွေက မှားယွင်းနေပါတယ်။
ရေက အစာချေဖြစ်စဉ်ကို မထိခိုက်စေတဲ့အပြင် အားပေးကူညီပေးတယ်
အစာချေစနစ်အတွင်းကို အစိုင်အခဲတွေထက် မြန်မြန်ဖြတ်သန်းသွားနိုင်မယ့် ဘယ်အရည်မျိုးသောက်သုံးတာဟာ အစာချေဖြစ်စဉ်ကို အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အစားစားရင်း ရေအနည်းငယ်သောက်တာကလည်း အစာချေရည်တွေရဲ့ အာနိသင်ကို သက်ရောက်မှုမရှိစေတဲ့အပြင် အစိုင်အခဲအစာတွေကို အစာချေလမ်းကြောင်းရဲ့ အစပိုင်းမှာတင် ချေဖျက်နိုင်ဖို့အတွက် အထောက်အကူတောင်ဖြစ်စေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အစာစားရင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စားပြီးမှပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရေသောက်တာက ပြဿနာမရှိတဲ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အစာစားပွီးပွီးခငျြး ရသေောကျသငျ့လား ????
အစားတဈခုခု စားနတေုနျးမှာ ရမေသောကျဖို့ ဒါမှမဟုတျ စားပွီးပွီးခငျြးမှာ ရမေသောကျဖို့ ပွောလရှေိ့ကွပါတယျ။ ဒီလိုရသေောကျမယျဆိုရငျ အစာခရြေညျရဲ့အာနိသငျကို လြော့ကသြှားစပွေီး အစာမကွဖွေဈနိုငျတယျလို့ ယုံကွညျထားကွတာတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဒီအခကျြက မှနျကနျရဲ့လားဆိုတာကို လလေ့ာဆနျးစဈကွညျ့ဖို့ လိုပါတယျ။
အစောခခြွေငျးလုပျငနျးစဉျက အစားတဈခုခုကို သငျ့ပါးစပျထဲကို ထညျ့လိုကျတဲ့အခြိနျက စတငျပါတယျ။ ပါးစပျထဲမှာ ၀ါးစားလိုကျတာနဲ့ အစားအစာတှကေို ပြော့သှားစဖေို့အတှကျ တံတှေးထှကျလာအောငျ ပါးစပျထဲက တံတှေးဂလငျးတှကေို လှုံ့ဆျောမှုဖွဈစပေါတယျ။ တံတှေးနဲ့ထိတှပွေီ့းပြော့ပြောငျးသှားတဲ့အစာတှကေို သှားနဲ့ ၀ါးစားပွီး အစာရမြေိုပွှနျကနတေဆငျ့ အစာအိမျထဲကို ရောကျရှိသှားပါတယျ။ အစာအိမျထဲမှာတော့ အစာခအြေကျဆဈရညျနဲ့ ထပျတှပွေီ့း ထပျမံပွိုကှဲသှားပါတယျ။
ထို့နောကျမှာတော့ အူသိမျတှထေဲကို ရောကျရှိကာ ပနျခရိယနဲ့အသညျးက ထုတျလုပျပေးတဲ့ ပနျခရိယအငျမျဇိုငျးတှေ၊ သညျးခွရေတှေနေဲ့ ရောနှောသှားပါတယျ။ ဒီဖွဈစဉျမှာ ပွိုကှဲနတေဲ့အစားအစာတှကေ အဟာရဓာတျတှကေို ခန်ဓာကိုယျက စုပျယူပါတယျ။ မစုပျယူနိုငျတဲ့ အစာဟောငျးတှကေတော့ အူမကွီးအတှငျးကို ရောကျရှိသှားကာ အပွငျကို စှနျ့ထုတျလိုကျပါတယျ။ ဒီ အစာခဖြွေဈစဉျဟာ စားသောကျတဲ့ အစားအစာပျေါမှာမူတညျပွီး ၂၄ နာရီကနေ ရ၂ နာရီအထိ ကွာမွငျ့ပါတယျ။
ရသေောကျရငျ အစာခဖြွေဈစဉျကို ထိခိုကျစတေယျလို့ ဘာကွောငျ့ ထငျကွတာလဲ။
အစားစားနတေုနျးမှာ ရသေောကျတာဟာ အစာခရြေညျတှရေဲ့ အာနိသငျကို အားပြော့သှားစတေယျလို့ အမြားစုက ယုံကွညျတတျကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ တခြို့တှကေ ရသေောကျတာဟာ ခန်ဓာကိုယျက အဟာရဓာတျတှကေို မစုပျရသေးခငျမှာ အူလမျးကွောငျးအတှငျး မွနျမွနျဖွတျသနျးသှားစတေယျလို့လညျး ယူဆတတျကွပါတယျ။ ဒီယူဆခကျြတှကေ မှားယှငျးနပေါတယျ။
ရကေ အစာခဖြွေဈစဉျကို မထိခိုကျစတေဲ့အပွငျ အားပေးကူညီပေးတယျ
အစာခစြေနဈအတှငျးကို အစိုငျအခဲတှထေကျ မွနျမွနျဖွတျသနျးသှားနိုငျမယျ့ ဘယျအရညျမြိုးသောကျသုံးတာဟာ အစာခဖြွေဈစဉျကို အနှောကျအယှကျမဖွဈစနေိုငျတဲ့အကွောငျး လလေ့ာတှရှေိ့ထားပွီးဖွဈပါတယျ။ အစားစားရငျး ရအေနညျးငယျသောကျတာကလညျး အစာခရြေညျတှရေဲ့ အာနိသငျကို သကျရောကျမှုမရှိစတေဲ့အပွငျ အစိုငျအခဲအစာတှကေို အစာခလြေမျးကွောငျးရဲ့ အစပိုငျးမှာတငျ ခဖြေကျြနိုငျဖို့အတှကျ အထောကျအကူတောငျဖွဈစပေါသေးတယျ။ ဒါကွောငျ့ အစာစားရငျးပဲဖွဈဖွဈ၊ စားပွီးမှပဲ ဖွဈဖွဈ ရသေောကျတာက ပွဿနာမရှိတဲ့အပွငျ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ဇီဝကမ်မဖွဈစဉျကို မွှငျ့တငျပေးနိုငျပါတယျ။
Previous: ထူးခြားသော ငွေစာရင်းတစ်ခု
Next: Colonel Sanders သို့မဟုတ် အောင်မြင်မှုအတွက် နောက်ဆုံးအချိန်မရှိကြောင်း သက်သေပြခဲ့သူ